ဆေးညွှန်းမရှိသော Viagra သည်ယနေ့လူမည်းလူငယ်များ၏အိပ်ခန်း (2016) ကိုထိုးဖောက်ဝင်ရောက်ခဲ့သည်။ ဆီးလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါပါမောက္ခ David B. Samadi နှင့် Muhammed Mirza၊ ErectileDoctor.com MD ကိုတည်ထောင်သူ - သင့် ဦး နှောက်ပေါ်ရှိ Porn
ဆေးညွှန်းမရှိသော Viagra သည်ယနေ့လူမည်းလူငယ်များ၏အိပ်ခန်း (2016) ကိုထိုးဖောက်ဝင်ရောက်ခဲ့သည်။ ဆီးလမ်းကြောင်းရောဂါဆိုင်ရာပါမောက္ခဒေးဗစ်ခဆမာဒီနှင့်မိုဟာမက် Mirza၊ ErectileDoctor.com MD ကိုတည်ထောင်သူဖြစ်သည်
comments: အပိုဒ် porn-သွေးဆောင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများကိုရည်မှတ်နှစ်ခုလူသိများတဲ့ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဆရာဝန်များကနေကိုးကားပါရှိသည်။ ကောက်နှုတ်ချက်:
everydayhealth.com အဆိုအရသက်သေအထောက်အထားများပိုမို erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု porn နှင့်အတူယောက်ျားရဲ့ညှို့၏ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ၏တဦးတည်းဖြစ်မည်အကြောင်းအကြံပြုနှင့်လည်းယောက်ျားရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးပိုမိုဘုံပြဿနာသို့လှည့်နိုင်ပါသည်။
"မှုကြောင့်အင်တာနက်ပေါ်ရှိရရှိနိုင်သည့်ညစ်ညမ်းဖို့ကျနော်တို့လိင်ကမောက်ကမဖြစ်မှု၏ဤအမျိုးအစားတစ်ဦးကိုမှန်ကန် entity ကြောင်းထွက်ရှာတွေ့နေကြတယ်" ဟုကဆိုသည် ဒါဝိဒ်သည်ခ Samadi, MD နယူးယောက်စီးတီးရှိ Lenox Hill ကဆေးရုံတွင်စက်ရုပ်ခွဲစိတ်၏ urology ဌာနနှင့်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဥက္ကဋ္ဌ။ "ဒါဟာဦးနှောက်မဟုတ်ဘဲလိင်တံအတွက်ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ "
အချို့သောအတိုင်းအတာအထိ, porn-related ED မည်သူမဆိုထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်ဒေါက်တာ Samadi သူအဓိကအားဖြင့်သူတို့ရဲ့ဆယ်ကျော်သက်စောစော 20s ၌နေသောလူပျိုတို့ကိုထဲမှာကိုမြင်ကပြောသည်။
Baltimore အတွက်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးကို Johns Hopkins Bloomberg သတင်းဌာန School မှ benchmark သုတေသနအကြောင်းကို 18 သန်းအမေရိကန်လူတို့သညျသူတို့လိင်ဆက်ဆံဘို့လုံလောက်တစ်ခုစိုက်ထူအောင်မြင်ရန်သို့မဟုတ်ထိန်းသိမ်းထားဖို့မတတ်နိုင်သေးပါဆိုလိုတာက ED ရှိသည်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါပြဿနာကိုလိင်တံမှပိတ်ဆို့သွေးစီးဆင်းမှုသက်ဆိုင်သော, ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနိုင်ပါတယ်; စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ; ဒါမှမဟုတ်ပေါင်းစပ်။
"အချိန်ကိုအများစုဟာ, ထိုကဲ့သို့သောနှလုံးရောဂါသို့မဟုတ်ဆီးချိုရောဂါအဖြစ်နာတာရှည်ရောဂါ, erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုအထောက်အကူပြုရန်သော်လည်းငါ့အထူးသဖြင့်လက်တွေ့တွင်ကျွန်မမြင် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုရာခိုင်နှုန်း 15 မှ 20 ပြောပါလိမ့်မယ် porn စားသုံးမှုမှဆက်စပ်ဖြစ်ပါတယ်" ဟုဆိုပါတယ် Muhammed Mirza, MD ဂျာစီစီးတီး, NJ နှင့် ErectileDoctor.com ၏တည်ထောင်သူအခြေစိုက်ထားတဲ့ internist ။
ဒါဟာပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးကိုချောင်းမြောင်းဘယ်လောက်ညစ်ညမ်းသေချာပေါက်မဟုတ်ပါဘူး။ အမျိုးအစားကိုလည်းအခန်းကဏ္ဍနိုငျသညျ, Samadi ကဆိုသည်။ Playboy သို့မဟုတ် Penthouse ကဲ့သို့သောမဂ္ဂဇင်းများများ၌တွေ့မြင်ပျော့-Core ညစ်ညမ်းပုံရိပ်များမတူဘဲ, အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းယေဘုယျအားဖြင့်ပိုပြီးဂရပ်ဖစ်သည်နှင့်မကြာခဏ kinky, deviant, ဒါမှမဟုတ်ပင်အကြမ်းဖက်အပြုအမူသရုပ်ဖော်သည်။ ဒါဟာအစ 24 /7ရရှိနိုင်ပါတယ်။
porn လိင်များအတွက်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးရဲ့သည်းခံစိတ်ကိုတိုးမြှင့်ကြောင်းလက်တွေ့မမျှော်လင့်ချက်များဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်။ Samadi တစ်စုံတစ်ဦးကိုတစ်သမတ်တည်း ပို. ပို. အရက်ကိုသောက်တဲ့အခါမှာဖြစ်ပေါ်သောအရာကိုဖို့ဖြစ်ရပ်ဆန်းနှိုငျးယှဉျ။ နောက်ဆုံးတော့အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးခက်အချိန် inebriated feeling ရှိပါတယ်။ အလားတူ porn နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်အတူတွေ့ကြုံတတ်၏။
ဆောင်းပါး Link ကို
ပြည့်တန်ဆာများနှင့်ဆေးညွှန်းမပါသော Viagra သက်ကြီးရွယ်အိုလူမည်းအမျိုးသားများအကြားတွင် STDs များဖြစ်ပွားခြင်းကိုဖြစ်စေသည်
"အများအားဖြင့်သက်ကြီးရွယ်အိုများများအတွက်အထီး-တိုးမြှင့်မူးယစ်ဆေးအဖြစ်လူသိများ non-ဆေးညွှန်းတဲ့ Viagra, ဒီနေ့ရဲ့အနက်ရောင်ယောက်ျား (ငယ်ရွယ်ပြီးဟောင်း) ၏အိပ်ခန်းထိုးဖောက်မှုသိရပါတယ်။ "
မေလ 19, 16 အားဖြင့် Cory အလက်ဇန္ဒား Haywood
* ကလင်တန် O'Neal ဟာမျိုးရိုးဗီဇအံ့ဩဖြစ်ပါတယ်။ သူကအမြင့်နီးပါး6ခွကေို4လက်မရဲ့, သူ့ကောင် hulk ကြွက်သား၏အလွှာအပျေါမှာအလွှာပါဝင်ပါသည်နှင့်မြင်နိုင် bodyfat မှုဖြစ်ပါတယ်။ သူလည်းတစ်ဦးရဲ့အရွယ်အစား 14 ဖိနပ်ဝတ်ဆင်ဒါကြောင့်သင်ဘာကိုဆိုလိုသလဲဆိုတာကိုငါသိ၏။ အမည်မသိစောင့်စေဟုမေးအသီးအသီးအဘယ်သူကိုသူ့ရဲ့အတိတ်ချစ်သူများလက်တဆုပ်စာ, အဆိုအရမစ္စတာ O'Neal ဟာကြီးမားတဲ့အညိုရောင် ... fudge တံစဉ်၏မာနထောင်လွှားပိုင်ရှင်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာဘေးဖယ်သူသည်မိမိအဗီရိုထဲမှာကွာတွေထဲမှာအောင်းနေနိုင်ပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်ညစ်ညမ်း၏ multigenerational စုဆောင်းခြင်းမှသူ၏အများဆုံးတန်ဖိုးကြီးအပိုင်ပါပဲ။
အခွင့်အလမ်းအပျြောအပါးကိုယ်တော်တိုင်မှ O'Neal ဘို့သညျထအခါတိုင်းအတိတ်ကာလ, သူ gleefully ခေါ်ဆောင်သွားရုပ်ရှင်သူ၏အထူးရတနာသိုသို့တူးမယ်လို့နှင့်ခေတ်မီခေတ်အဖြစ်ယခင်ဆယ်စုနှစ်ထံမှထိုထံမှရိုက်ကူးဆွဲထုတ်, 1970s ၏အောင်ပွဲတွေနှင့်အတူစတင် porn-ရှင်ဘုရင် "Big" John Holmes ။ အခါသမယတွင်ကလင်တန်ပစ္စည်းများအတွက်ဝက်ဘ်, အများအားဖြင့်အာရှနှင့်အများအားဖြင့်လိင်တူဆက်ဆံခြင်းကိုထောက်ခံအပေါ်ယံအခွံလိမ့်မယ်။ သို့သော်များသောအားဖြင့်, မိမိမတရားသောသူတို့၏ကောင်းစွာ-သနား counterparts တွေကိုအားဖြင့်ထိုက်သည်အတိုင်းအပြစ်ပေးဖို့ "jackhammered" ဖြစ်ခြင်းရွှေဆံပင်ဂျိန်း Fonda အမျိုးအစားများဟောင်းအသံသွင်းခြင်းဖြင့်ကျေနပ်ခဲ့ရသည်။ ဒီလူအချို့ကိုအထူးသဖြင့်တဦးတည်း, ရုပ်ဆင်းသဏ္ဌာန်နှင့် girth အတွက်ဖြူစင်သော Mandingo အဘိဓါန်ပါဝါတစ်ခုဖြတ်ပြီးဖလားကိုရယူခဲ့တာပါ9လက်မကလင်တန်နှင့်ဆင်တူနေသည်။
အဖြစ်ဝေးအထီး pornstars go အဖြစ်ဟီလာရီကလင်တန်ရဲ့မူဆယ်အဘယ်သူ၏လက်လက်တောက်, ဆံပင်ရိတ်ဦးခေါင်းနှင့်စို့ဘောင်ဇာတ်ကားများစွာတွင်တွေ့မြင်နိုင်ပါသည်, 24 နာရီထက်ပိုပြီးတန်ဖိုးရှိနေတဲ့ဝါရင့် porker ဖြစ်ပါတယ်။ "ကျနော့်အကြိုက်ဆုံး porn ကြယ်ယ်စလီသွယ်တန်းထားသောပိုက်ဖြစ်ပါတယ်" ဟု O'Neal သူ့မျက်စိထဲမှာမွှောနှင့်အတူရှင်းပြသည်။ "သူ [သွယ်တန်းထားသောပိုက်] *** မိမိအဃ ... အမျိုးသမီးတစ်ဦး-အဖြူ, ဟစ်စပန်းနစ်, အာရှ, အနက်ရောင်အမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှကိုမျိုးကတဆင့်သွားပြီကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့သံအမတ်ကြီးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ "
အရွယ်ရောက်ပြီးသူရုပ်ရှင်ကြည့်ဘို့ကလင်တန်ရဲ့အစာစားချင်စိတ်အစစ်အမှန်အရာအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့, မိမိအလိုဆန္ဒနှင့်အတူတန်းတူနီးပါးဖြစ်ခဲ့သည်။ ပုခုံးတွ ecstasy ၏အသံသည်သူ၏ရုပ်မြင်သံကြားကနေ oozed နေချိန်မှာသူကမှန်မှန်, သူ့ဆိုဖာပေါ်တိုက်ပိတ်အချိန်လေးလဲလှယ်အတွက်စသောသူ၏အိပ်ရာထဲမှာအမျိုးသမီးအသိအကျွမ်းနှင့်အတူတွေ့ကြံ-ups ကိုစှနျ့လှတျချင်ပါတယ်။ ကလင်တန်ရဲ့ညစ်ညမ်း-fetish ၏ပြင်းထန်မှုနောက်ဆုံးမှာတစ် supersized ပြဿနာသို့ morphed ။ တစ်ညဒွန် Julio Tequila တစ်ခုတစ်ခုလုံးကိုပုလင်းကွဲပြီးနောက်, သူနဲ့တစ်ဦး voluptuous ဧည့်သည်ကသူတို့ primal စိတျကိုမလွန်ဆန်နိုင်။ "ကျွန်မရဲ့ဂျင်မီထွက်ကြာပွတ်နဲ့သွားကြဖို့အဆင်သင့်ပဲ" ဟု O'Neal ပြန်ပြောပြ။ "ကျွန်မနေတဲ့ပေါက်ကွဲသံကြီးနှင့်အတူစတင်ခဲ့သော်လည်းငါ့အမြောက်များတစ်ဦးခေါက်ဆွဲသို့လှည့်ရှေ့တော်၌ရှည်လျားမဟုတ်ခဲ့ပေ။ သူမဟာပိုမိုနက်ရှိုင်း '', ပိုမိုနက်ရှိုင်း 'ဟုထားရှိမည်' 'ဒါပေမဲ့ကျွန်မရဲ့စိုက်ထူကိုင်ထားလို့မရဘူး။ ကျွန်မပိုမိုနက်ရှိုင်း [မဆို] ငါမသွားနိုင်, နည်းနည်း * ဇ, စဉ်းစားနေခဲ့တယ်။ "
O'Neal သူမသည် up ပြုလုပ်ရတဲ့ကြိုးစားခဲ့ "ဆက်လက်ပြောကြားသည်။ သူမသည်သူမ၏လက်အား-သူမကပင် [စိုက်ထူ] နောက်ကျောတက် [မိမိလိင်တံ] ရရန်သူမ၏ခြေနှင့်ငါ့ကိုပယ် jacked, သူမ၏ပါးစပ်ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ရှိသမျှသောအလုပ်မလုပ်ဘူးသည့်အခါသူမကသူမ၏အဝတ်အစားတွေကိုတက်ခူးနှင့်တံခါးကိုအထဲကချီတက်။ သူမသည်ပင်လက်တွေ့ကျကျအဝတ်အချည်းစည်းခဲ့ on-the ဟိုကျောသူမ၏ panties ထားရန်နှောင့်အယှက်မပေးခဲ့ပါဘူး။ [ကျွန်မ] ကတည်းကသူမ၏မြင်ကြပြီမဟုတ်။
"ဒါကပေးနေတာကယ့်ကိုငါ့ဦးခေါင်းနှင့်အတူ messed ။ ငါ porn တောင်မှကျွန်မအကြိုက်ဆုံးစောင့်ကြည့်မယ်လို့, ငါခက်ခဲမရနိုင်ဘူး။ ငါသော့ကိုလှည့်သော်လည်းငါ့အင်ဂျင် start မဟုတ်ဘူး။ အထက်တန်းကျောင်း, ငါ၏ဃ ** ဋဒါခက်ခဲကြောင့်နာကျင်ခဲ့ကြောင်းအရလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါဟာစိုးရိမ်ဖွယ်ရာဖြစ်ခဲ့သည်။ ခဏသောတော့ဘူး။ ကျွန်မထိုညဉ့်ခြင်းမှမှတ်မိနိုင်ဆုံးကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းအရာသူမကငါ့အစားခွက်ထဲကလမ်းလျှောက်မတိုင်မီသူမ၏တစ်ဦး '' ပုစွန်d** ဋ nigga '' ငါ့ကိုခေါ်ဆိုသည်။ "
ဒါဟာရှက်စရာယခုအချိန်တွင် Viagra နှင့်အခြားလိင်တံ-ပျတိုးထွက်ပစ္စည်းများနှင့်အတူစမ်းသပ်ဖို့ O'Neal ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်သတိပေးခံရ။ သူကစပိုင်းတွင်အလွန်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့ပြင်ပမှာအကူအညီတောင်းခံခြင်း၏အလားအလာကိုခုခံ။ ဒါပေမယ့်နောက်ဆုံးမှာသည်သူ၏အတ္တတစ်ချိန်ချိန်သူသည်နောက်တဖန်သူ့ရဲ့ "Deflation" လိင်အင်္ဂါတုန့်ပြန်ကျော် glazing အမျိုးသမီးတစ်ဦးရဲ့မျက်စိ၏အရှက်ကိုတွေ့ကြုံခံစားမယ်လို့တစ် mounting ကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်မြန်မာဘာသာစကားအရခဲ့သည်။ အဲဒီအစားအနှောင်းပိုင်း-ညဥ့် infomercials နှင့် Google အပေါ်မှီခိုခြင်းထက်, O'Neal Viagra ၏သက်ရောက်မှုနှင့် ပတ်သက်. အတွက်ဆရာဝန်တစ်ဦးရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုကိုတိုင်ပင်၏လက်တွေ့ကျတဲ့ရွေးချယ်မှုဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ သူကအစည်းအဝေးကိုသူတောက်ပ, အပြာဆေးပြားတစ်အမှတ်တံဆိပ်အသစ်တစ်စုံကိုလက်ခံရရှိကြောင်းညွှန်ကြားပေးမယ့်ဆရာဝန်၏မှတ်ချက်နှင့်အတူအဆုံးသတ်မယ်လို့ယူဆ။ အဘယ်အရာကိုနောက်ဆုံးမှာ transpired သို့သော်ပြိုင်ပွဲတစ်ဦးလူသားရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုယ်တွင်းအင်္ဂါ၏အရွယ်အစားပေါ်တွင်ရှိပြီးသော erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနောက်ကွယ်မှဒဏ္ဍာရီအဖြစ်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုနှင့် ပတ်သက်. သူတို့၏အကြောင်းကိုတစ်ဦးလက်တန်းဟောပြောပို့ချချက်ဖြစ်ခဲ့သည်။
ကလင်တန်ရဲ့ဆရာဝန်-bespectacled နှင့်မီးခိုးရောင်ဆံပင်-စိတ်ချပါသူ့ကိုအများဆုံးအရွယ်ရောက်ပြီးသူယောက်ျား, မခွဲခြားဘဲမိမိတို့၏နိုင်ငံသား၏, ထိုအရှည် 5-7 လက်မကနေပျမ်းမျှအားပ္ပံအပေါ်ပိုက်တပ်ဆင်ထားကြသည်။ သို့သော်လူ girth, ဆရာဝန်ကရှင်းပြသည်, ပုံမှန်အားဖြင့် "တစ်လူနာထံမှနောက်တစ်နေ့မှကွဲပြားခြားနားသည်။ "
အဆိုပါ Nnamdi Azikiwe တက္ကသိုလ်သင်ကြားရေးဆေးရုံကြီး (Nnewi, နိုင်ဂျီးရီးယား) မှာကောက်ယူမယ့်လေ့လာမှုအတွက်, 115 အရွယ်ရောက်ပြီးသူယောက်ျား၏အုပ်စုတစုကိုတစ်ကြိမ်နှင့်အလုံးစုံတို့အဘို့လိင်တံအရွယ်အစားနှင့်အပြေးပြိုင်ပွဲအကြားဆက်စပ်မှုရှိရဲ့ဟုတ်မဟုတ်ဆုံးဖြတ်ရန်ဆန်းစစ်ခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါရလဒ်များစာရေးဆရာများမှလက်လှမ်းခဲ့ကြသည်သောအခြားတိုင်းရင်းသားအမျိုးသားများအပေါ်အစီရင်ခံအလားတူအဓိကလေ့လာမှုများ, နှင့်နှိုင်းယှဉ်ခဲ့ကြသည်။ စာမေးပွဲအီတလီ, ဂရိ, ကိုရီးယား, ဗြိတိန်နှင့်အမေရိက၏အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအပါအဝင်ကမ္ဘာအနှံ့အမျိုးမျိုးသောမြို့ကြီးများအတွက်ဖျော်ဖြေခဲ့ကြသည်။ နိဂုံးချုပ်မှာတော့လူမည်းများ၏ယုတ် Full-လမ်းပိုင်း penile အရှည်ဟာ (13.37cm) အကြီးဆုံးနှင့်ယုတ် flaccid အရှည် 9.36cm ခဲ့ပါတယ်။
"ဒီရှုထောင့်, ဘာမှလျှင်, ယောက်ျားလေးများအနေဖြင့်ယောက်ျားခွဲခြားဘာလဲ," O'Neal ရဲ့ဆရာဝန်ဝက်ရယ်စရာရှင်းပြသည်။ "တာရှည်တဲ့အမျိုးသမီးတွေအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပျြောအပါးပေးကမ်းခြင်း၌တစ်ဦးအနည်းငယ်မျှသာအခန်းကဏ္ဍမှပါဝင်သည်။ ကျွန်မအစားအစာကိုကိုးကားစေနိုင်လျှင်အမျိုးသမီးတစ်ဦးလိင်ဆက်ဆံဘို့သည်မွတ်သိပ်သောအခါ, သူမကအမဲသားဆတ်တောက်ခြင်းနှင့်အတူစိတ်ကျေနပ်မှုမရပါလိမ့်မယ်။ သူမသည်တစ်ဦး porterhouse ကင်မလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ "
"ဟုသူမကသင်ရရှိပါသည်သောအရာကိုရှိသည်ဖို့ကံကောင်းမယ့်ကြောင်းကိုသင်၏ရည်းစားကိုပြောပြပါ။ ဒါဟာလုံလောက်မှုမရှိခြင်းမရှိနည်းလမ်းဖြင့်ပါပဲ။ သို့သော်အလွန်အကျွံ porn စောင့်ကြည့်သူတစ်ဦးချစ်ခင်အမျိုးသမီးတစ်ဦး၏ကုမ္ပဏီတွင်ဖွင့်လျှင်ပင်နှောင့်နှေးခြင်းသို့မဟုတ်အချို့ကိစ္စများတွင်စိုက်ထူရှိသည်ဖို့လူနိုင်စွမ်းအယှက်ဖို့အလားအလာရှိပါတယ်။ သင်သည်ထိုပြဿနာနှင့်အတူရုန်းကန်နေနိုင်ပါသည်။ "
"မှုကြောင့်အင်တာနက်ပေါ်ရှိရရှိနိုင်သည့်ညစ်ညမ်းဖို့ကျနော်တို့လိင်ကမောက်ကမဖြစ်မှု၏ဤအမျိုးအစားတစ်ဦးကိုမှန်ကန် entity ကြောင်းထွက်ရှာတွေ့နေကြတယ်" ဟုဒါဝိဒျသခ Samadi, MD နယူးအတွက် Lenox Hill ကဆေးရုံတွင်စက်ရုပ်ခွဲစိတ်၏ urology ဌာနနှင့်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဥက္ကဋ္ဌကပြောပါတယ် နယူးယောက်စီးတီး။ "ဒါဟာဦးနှောက်မဟုတ်ဘဲလိင်တံအတွက်ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ "
"အချိန်ကိုအများစုဟာ, ထိုကဲ့သို့သောနှလုံးရောဂါသို့မဟုတ်ဆီးချိုရောဂါအဖြစ်နာတာရှည်ရောဂါ, erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုအထောက်အကူပြုရန်သော်လည်းငါ့အထူးသဖြင့်လက်တွေ့တွင်ကျွန်မမြင် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုရာခိုင်နှုန်း 15 မှ 20 ပြောပါလိမ့်မယ် porn စားသုံးမှုမှဆက်စပ်ဖြစ်ပါတယ်" ဟု Muhammed Mirza ကပြောပါတယ် , MD ဂျာစီစီးတီး, NJ နှင့် ErectileDoctor.com ၏တည်ထောင်သူအခြေစိုက်ထားတဲ့ internist ။
အများစုမှာဖွယ်ရှိ, porn-Overload တစ်ဦးအမှုကသူ့တိုက်ခန်းမှာကံကောင်းတဲ့အဲဒီညအပေါ် ED ၏သူ၏ပထမဦးဆုံးရင်ဆိုင်တွေ့ဆုံခြင်းတွေ့ကြုံခံစားရန်, ထို့နောက် 27 နှစ်ရှိပြီ, O'Neal စေသောအရာဖြစ်တယ်။
"ကျွန်မရဲ့ဣန္ဒြေပြန်လည်ဖို့ကြိုးစားစဉ်တိုင်းယခုပြီးတော့သူ့ကိုငါဟနေခြင်း၏ flashbacks get" ဟုသူကဦးဇော်လင်းက။ "ကျွန်မနေတဲ့မြင်းနှင့်တူဆွဲထားတယ်, ဒါပေမယ့်ကတည်ငြိမ်စွန့်ခွာချင်ခဲ့ပါဘူး။
"ဒါဟာအမျိုးသမီးတွေအနက်ရောင်ယောက်ျားကြီးတွေဃ * icks ရှိသည်ဖို့မျှော်လင့်ထားကြောင်းမကူညီဘူး။ ဒါဟာယဉ်ကျေးမှုအရာပါပဲ, ကြှနျုပျတို့မကယ်မနှုတ်နိုင်လျှင်, သူတို့ [အမျိုးသမီးများ၏] ယောက်ျားအဖြစ်ကိုအရိုသေလေးစားမှုကိုဆုံးရှုံး။ သင်ပြုသမျှအားလုံးသည်ဤသည်နေ့ရက်ကာလဂီတကိုနားထောင်ဖြစ်ပါတယ်။ Rihanna, နစ်ကီမီပင်ဘီယွန်းစ, ခပ်သိမ်းသောသူတို့သည်သာအချို့သောအရွယ်အစားအားဖြင့်ကျေနပ်နိုင်ပါတယ်ဘယ်လိုသီချင်းစာသားရေးပါ။ အခြားအမျိုးသမီးကင်လုပ်ခိုင်းကြောင့်လိင်ခံစားရလို့ယူဆတယ်ဘယ်လိုသူတို့ရဲ့မျှော်မှန်းချက်သြဇာလွှမ်းမိုးနှင့်မည်ကဲ့သို့ကြီးမားသောတစ် nigga ရဲ့ဃ ** ဋဖြစ်သင့်ကြောင်းနားထောင်ကြလော့။ ဒါဟာကဆက်ပြောသည်ဖိအားတွေအများကြီးပါပဲ။ တချို့ကယောက်ျားတွေသူတို့အလုပ်အမှုကိုပြုရထားတဲ့အပိုထပ်တိုးလိုအပ်ယုံကြည်ပါတယ်။ ခဏတစ်ဘို့, ငါခံစားရတယ်, ငါအသေး aint ဘယ်လိုပါပဲ။ "
Self-သံသယသူ၏နတ်ဆိုးများ exorcise တစ်ဦးအမြန်ပြင်ဆင်ချက်ရှာဖွေနေ, O'Neal တဦးတည်းနံနက်နိုးနှင့်သူ၏အဝတ်လျှော်တဲ့အခန်းများအတွက် beeline ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ လူတသိမ်းယူကဲ့သို့ပင်သူတစ်ဦးမြေအောက်ဆေးဝါးအားဖြင့်သုံးလအစောပိုင်းကသူ့ကိုအားပေးပြီးမှစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုကဒ််ဂျင်းဘောင်းဘီတစ်ထည်နေရာချထားရန်မျှော်လင့်, ဟောင်းနွမ်းအဝတ်တစ်အမှိုက်ပုံမှတဆင့် rummaged ။
"သူ Dick ဆရာဝန်သူ့ကိုယ်သူခေါ်ဆို" O'Neal ဟာ sheepish သှားပွီး။ ပွုံးနှင့်အတူရှင်းပြသည်။ "ကျွန်မနေတဲ့ Co-အလုပ်သမားမှတဆင့်သူ့ကိုတွေ့ဆုံခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ကြောင်းခြင်းမပြုမီ, ငါသည်ငယ်ရွယ်ယောက်ျားတွေအထူးသဖြင့်အနက်ရောင်ယောက်ျားတွေ, ဒီပစ္စည်းပစ္စယတာခံခဲ့ရမည်မျှသတိထားမဟုတ်ခဲ့ပေ။ သူဆေးပြားအမျိုးမျိုးတို့ကိုခဲ့ရပြီးသူ့ကားရဲ့ပင်စည်ကိုထုတ်ခြင်းနှင့်စျေးပေါအဘို့ထိုသူတို့ရောင်းချခဲ့သည်။ အဆိုပါဆေးပြား "Black က Gorilla", "သားပိုက်ကောင်" နှင့် "ပင်လယ် Monster" ကဲ့သို့အမည်များခဲ့ - သူတို့အားလုံးသင့်ရဲ့ဃ *** တက်တကိုယ်လုံးရောင်အောင်ထင်ခဲ့ကြသည်။ ငါကဘေးကင်းလုံခြုံကစားနဲ့တဲ့ Viagra ရွေးချယ်ခဲ့သည်။ ငါအကြီးတန်းနိုင်ငံသားတွေအသေခံခြင်းမရှိဘဲအသုံးပြုနိုင်နိုင်လျှင်မူကား, ငါ့အဘို့အများကြီးအန္တရာယ်ရှိတယ်မဖြစ်လိမ့်မယ်လို့တွက်ဆ။ "
Viagra (sildenafil), နှင့်အထီးစွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်စေရန်ဖန်တီးသည်အခြားဆေးညွှန်းမူးယစ်ဆေးဝါး, သွေးကြောများ၏နံရံတှငျတှေ့ကြွက်သားပြေစေပြီးခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အထူးဒေသများသို့သွေးစီးဆင်းမှုတိုးပွားစေပါသည်။ ဒါဟာ Pfizer ရဲ့ Sandwich က, Kent, အင်္ဂလန်အတွက်သုတေသနစက်ရုံမှာအလုပ်လုပ်ဆေးဝါးဓာတုဗေဒ၏အုပ်စုတစုအားဖြင့်ဖန်တီးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ယင်း၏မကြာခဏခေါ်တော်မူသကဲ့သို့အနညျးငယျအပြာဆေးလုံး, စပိုင်းတွင်သွေးတိုးရောဂါ (သွေးတိုး) တွင်အသုံးပြုခြင်းနှင့် angina pectoris (ischemic နှလုံးရောဂါ၏လက္ခဏာ) ကိုလေ့လာခဲ့ခံခဲ့ရသည်။ Viagra အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုပြင်ဆင်ရန်အတည်ပြုပထမဦးဆုံးပါးစပ်ကုသမှုဖြစ်လာမတ်လ 1996, 27 အပေါ် FDA ကအားဖြင့် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုအတွက်အသုံးပြုရန်အတည်ပြု, 1998 အတွက်မူပိုင်ခွင့်များနှင့်နောက်ပိုင်းတွင်ထိုနှစ်တွင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိရောင်းရန်ကမ်းလှမ်းခံခဲ့ရတယ်။ ဒါဟာမကြာခင်မှာတို့သည်ကြီးစွာသောအောင်မြင်မှုဖြစ်လာခဲ့သည်: နှစ်စဉ်ရောင်းအားသည်အမေရိကန် $ 2008 ဘီလီယံ 1.934 အတွက်အထွတ်အထိပ်သို့ရောက်သွားသည်။
Viagra ဆက်ဆက်မူးယစ်ဆေးဝါးများ enhancement ပတ်သတ်ပြီးအတွက်အဓိကကစားသမားဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့အကြီးတန်းနိုင်ငံသားများယနေ့ Cialis, Levitra နှင့် ExtenZe တူသောအမှတ်တံဆိပ်အပါအဝင်မြောက်မြားစွာအခြားနည်းလမ်းမှဝင်ရောက်ခွင့်ရှိသည်။ ငါဟောပြောသောဤစကားကိုရိုက်ထည့်အဖြစ်နိုင်ငံတစ်ဝှမ်းအသက်ကြီးထောင်ပေါင်းများစွာ၏သူတို့ရဲ့သိပ္ပံနည်းကျ-ခိုင်မာ ding-a-Ling နှင့်အတူမျက်နှာ၌အဘခမည်းတော်အချိန်ရိုက်နေကြတယ်, လက်ျာဘက်ပါပဲ။ သူတို့အမှန်တကယ်နေထိုင်နေ ... နဲ့လိင်ဆက်ဆံနေ - ဤဖြစ်စဉ်ကြောင့်လူပေါင်းဂျုံယာဂုတစ်ပန်းကန်ကျော် hunched သူတို့ရဲ့ဆည်းဆာနှစ်ကြာကြသည်မဟုတ်ဆိုလိုတာကလူ့သက်တမ်းတိုးချဲ့ဆေးဘက်ဆိုင်ရာသိပ္ပံ, ရန်ဖြစ်ပါသည်။ တစ်ဦးကလေ့လာမှုအသစ်သက်ကြီးရွယ်အိုများယောက်ျား၏ 54 ရာခိုင်နှုန်းခန့်အထိတွေ့နှင့်သက်ကြီးရွယ်အိုများအမျိုးသမီးများ 31 ရာခိုင်နှုန်းကိုအနည်းဆုံးနှစ်ကြိမ်တစ်လလိင်ဆက်ဆံသတင်းပို့ပါ။ ဤအရာအလုံးစုံဟောင်းအလောင်းတွေ ecstasy အတွက်အတူတကွပွတ်တိုက်နှင့်အတူပါကစျေးကွက် "။ လားဆေးပညာ" ၏တစ်ဦး overabundance နှင့်အတူပြည့်နှက်ဒါပေမယ့်ဖမ်းရှိပါတယ်ဘယ်ကြောင့်အများစုအာမခံကုမ္ပဏီများကဝယ်ယူမှကုန်ကျဒေါ်လာ၏ရာပေါင်းများစွာထွက် Shell ဆန္ဒရှိနေကြသည်မဟုတ်အံ့ဩစရာမရှိဖွင့် Viagra နှင့်အခြားခွန်အားမရှိခြင်း-တိုက်ပွဲများဖြည့်စွက်။ က 10mg ၏ 100 Viagra တက်ဘလက်များတစ်ဦးချင်းစီကိုဝယ်ယူမှကြွလာသည့်အခါဤအကွင်းဆက်ဆေးဝါးများ၏တစ်ဦးချင်းစီမှာအောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်း, ကုန်ကျစရိတ်နေသောခေါင်းစဉ်:
CVS: $ 446.99 (တက်ဘလက်နှုန်း $ 44.70),
Walgreens: $ 420.99 (တက်ဘလက်နှုန်း $ 42.10),
Walmart: $ 421.20 (တက်ဘလက်နှုန်း $ 42.12) ။
ဘဏ်ကိုချိုးဖောက်ရှောင်ရှားရန်, အသက်-အလယ်တန်းနှင့်သက်ကြီးရွယ်အိုများယောက်ျားတစ်ဦးတိုးပွားလာတရားမဝင်နည်းလမ်းများမှတဆင့် Viagra နဲ့တူဆေးဝါးဆည်းပူးဖို့ဝင်ရောက်ခြင်းနေကြသည်။ ထောက်ပံ့ရေးနှင့်ဝယ်လိုအားတစ်ဦးဂန္ကိစ္စတွင်ခုနှစ်, ထိုအက high-စျေးနှုန်းညွှန်းမူးယစ်ဆေးဝါးများကိုစိုးရိမ်ကြောင်း၏သှနျးလောငျးအထူးသဖြင့်အတွင်းစိတ်-မြို့ Los Angeles မြို့၏နယ်နိမိတ်အတွင်းအများအပြားမြေအောက်ဆေးဆိုင်များမှမြင့်တက်ပေးထားတယျ။ (Florence နှင့်ပင်မစိန့်ပေါ်တွင်တည်ရှိပြီး) တစ်ဦး Winchell ရဲ့ Donut ဆိုင်မှာ၏ကားရပ်နားအများကြီးအတွက်တစ်လမ်းကုန်သည်တစ်ဦးအခြို့သောအသက်အာဖရိကန်အမေရိကန်အထီးမှတရားမဝင်တဲ့ Viagra ရောင်းချနေခြင်းအားဖြင့်အတိတ်6နှစ်ပေါင်းတစ်လူနေမှုဖန်ဆင်းတော်မူပြီ။ သူကသူ့ Hustle သည်အခြားသက်ကြီးရွယ်အိုများရွယ်တူချင်းအတူ dayroom အတွက်နေရပ်ရင်း၏သာမန်လှုပ်ရှားမှုမှတင်သွင်းဖို့ဆန္ဒ, ကျကွီးရှယျအိုမြား, သူတို့ရဲ့ရွှေနှစ်အတွင်းစိတ်လှုပ်ရှားမှုရှာကြံအများအပြားမှဝန်ဆောင်မှုထောက်ပံ့ပေးယုံကြည်သည်။ အမည်မသိစောင့်စေခြင်းမေးမြန်းခြင်း, ဤဆောင်းပါး၏ဘို့အလိုငှါနာမတော်ကိုအမှီ ပြု. ချာလီပေးထားပါလိမ့်မည်သူကုန်သည်, အဓိကအားဟောင်း geezers နောက်ကျောက "ခံစားချက်" ကိုရရန်ရှာဖွေနေ, horny ဖောက်သည်တစ်ဦးသာရှိပြီးတန်းစီဇယားစိုက်ပျိုးခဲ့သည်။ သူသည်သင်တို့ကိုယင်း၏ the1980s ထင်နှင့်သူအက်ကွဲကင်းတွန်းအားပေးရဲ့ချင်ပါတယ်, ထိုကဲ့သို့သောအနိမ့်ကုန်ကျစရိတ်မှာမိမိ (ယူဆရအခိုးခံရ) ကုန်သွယ်ရောင်းသည်။ အောက်မှာဖေါ်ပြတဲ့အတိုင်းမိမိအနှုန်းထားများနေသောခေါင်းစဉ်: 10 မီလီဂရမ် ($ 5), 20 မီလီဂရမ် ($ 15), နှင့် 50 မီလီဂရမ် ($ 25) ။
ပုံမှန်လည်း Winchell ရဲ့ရောင်းတစ်ခုတည်းစီးကရက်မှာဆိုင်ဖွင့်လှစ်ထားသူတစ်ဦးသူချင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တစ်ခုမှာချာလီသက်ကြီးရွယ်အိုများတစ်အသားစားသတ်မှတ်ထားသည်။
"သူတို့ငယ်ရွယ်ဟွတ်ရနိုင်ဒါဒါက motherf * cka အသက်ကြီးအပေါ် preying ဖြစ်ပါတယ်, သူကသူတို့ကို Viagra ရောင်း၎င်းတို့၏ပင်စင်ငွေကိုယူ," 60 နှစ်အရွယ် Terrance ဘရောင်းတစ်ဦးအငြိမ်းစားမြို့လုပ်သားကပြောသည်။ "သူကသူတို့တစ်ခုခုဖမ်းရှေ့တော်၌မိမိဖောက်သည်ကွန်ဒုံးရောင်းချခံရဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဒီမှာပြည့်တန်ဆာထွက်အများစုဟာ STDs ရှိသည်။ "
ထူးဆန်းသည်မှာထွန်းသစ်စအစီရင်ခံစာများအရနိုင်ငံတစ်ဝှမ်းရှိသက်ကြီးရွယ်အိုလူမည်းအမျိုးသားများတွင်အိပ်ချ်အိုင်ဗွီနှင့်အေအိုင်ဒီအက်စ်ရောဂါလက္ခဏာပြမှုတိုးလာခြင်းဖြစ်သည်။ ကိစ္စများစွာတွင်သူတို့သည်ဤရောဂါများ (နှင့်အခြားသူများ) ကိုသူတို့၏ဇနီးများသို့မဟုတ်သိသာထင်ရှားသည့်အခြားသူများသို့လွှဲပြောင်းပေးကြသည်။ အချို့သောအသက်အရွယ်များတွင်သန္ဓေတားနည်းကိုအသုံးပြုရန်အကြောင်းပြချက်မရှိသလောက်ဖြစ်သည်။ ကိုလံဘီယာတက္ကသိုလ် Mailman ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးကျောင်းမှသုတေသီတစ် ဦး ဖြစ်သူ Ellen AB Morrison ၏အဆိုအရသက်ကြီးရွယ်အိုများအရအေအိုင်ဒီအက်စ်ရောဂါဖြစ်ပွားမှုသည်အရောင်ရင့်သက်ကြီးရွယ်အိုများကြားတွင်အများဆုံးဖြစ်သည်ဟုဆိုသည်။ ဤ“ စွပ်စွဲချက်” ဖြစ်ရပ်သည်လူ့အဖွဲ့အစည်း၏မိမိကိုယ်ကိုယဉ်ကျေးမှုရှိခြင်း၏အမှတ်အသားဖြစ်သည် - ကျေနပ်မှုသည်ယုတ္တိဗေဒနှင့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာလုံခြုံမှုကိုမကြာခဏပယ်ချသည်။ Los Angeles မှလူအိုတစ် ဦး သည် ED ရောဂါခံစားနေရလျှင်သူလုပ်သင့်သည်မှာ Flincnce နှင့် Main St. ရှိ Winchell's နှင့် Viagra တွင်ရပ်တန့်ရန်ဖြစ်သည်။ Viagra သည် glazed donut ထက်စျေးသက်သက်သာသာသာဖြစ်သည်။ ။
http://www.eurweb.com/2016/05/pills-from-the-underground-solicitation-of-prostitutes-and-non-prescription-viagra-causing-a-spike-in-aids-diagnosis မှာဆက်ဖတ်ရန် -among-သက်ကြီးရွယ်အိုများ-အနက်ရောင်-ယောက်ျား / # toC5bx735DgtBXyQ.99